Topnepalnews.com | प्रहरीको पीडा : दिनभर सडकमा ड्यूटी, कसले गर्छ हाम्रो सुरक्षाको ख्याल !
Posted on: March 30, 2020 | views: 2106
काठमाडौ । विश्व नै कोभिड– १९ (कोरोना) भाइरसले त्राहिमाम छ । विश्वभर ७ लाखभन्दा धेरै मानिस कोरोना भाइरबाट संक्रमित छन् भने ३३ हजारभन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
नेपालमा कोरोनाको संक्रमण अहिलेसम्म ५ जनामा मात्र देखिएको छ । कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिनका लागि नेपाल सरकारले देशैभरि लकडाउन गरेको अवस्था छ । लकडाउनको अवस्थामा देशभरका मानिसहरू आफ्नै घरमा सुरक्षित बसेका छन्, तर प्रहरी भने अहिले सडकमा छ ।
लकडाउनको कार्यान्वयन गराउन र आमनागरिकको सुरक्षाका लागि खटिएको नेपाल प्रहरी केरोना भाइरसको संक्रमणबाट कति सुरक्षित छ त ? प्रहरीले सुरक्षाको के कस्ता विधिहरू अपनाएको छ ? यो आमचासोको विषय हो ।
सडकमा उभिने अधिकांश प्रहरीले समान्य खालको मास्क प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । स्यानिटाइजर र साबुन पानीले हात धुने खालका सेफ्टीहरू कतिपय चोकमा उपलब्ध भएपनि सबै ठाउँमा भने छैन ।
‘बजारमा मास्क पनि पाइँदैन हामीले कपडाको मास्क प्रयोग गरिराखेका छौं त्यसले कति छेक्ला र ? मानिसहरू नजिक आउँदा पनि कोरोना सर्छ कि भन्ने डर लाग्छ,’ बालाजु क्षेत्रमा ड्यूउटीमा खटिएका एक जवानले गुनासो गरे ।
दिनभर ड्यूटीमा खटिएको प्रहरीलाई बेलुकी आफ्नो ब्यारेकमा धेरै जवानहरूसँग एउटै कोठामा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले यदि कोही प्रहरीलाई कोरोनाको संक्रमण भएको खण्डमा अरू जोगिने देखिँदैन ।
‘हामीले बाहिरबाट जाँदा साबुन पानीले हात त धुन्छौं के त्यतिमात्र पर्याप्त हो ? एउटा कोठामा २ भन्दा धेरै जवानहरू सुत्नुपर्छ यदि कसैलाई कोरोनाको संक्रमण भएको खण्डमा सबैलाई सर्ने अवस्था छ,’ माइतीघर थापाथली क्षेत्रमा खटिएका एक प्रहरी हवल्दारले आफ्नो गुनासो सुनाए ।
ड्यूटीमा खटिएर आएका प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो ब्यारेकमा बेलुका सुत्न आउँदा राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुन र स्यानिटाइजरको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि खालको सुरक्षा प्रविधि नभएको नेपाल प्रहरीका सह–प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) उमेशराज जोशीले स्वीकारे ।
‘हामीले सडकमा ड्युउटीमा खटिएर आएका प्रहरी कर्मचारीलाई साबुन पानीले हात हुने र स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य बनाएका छौं,’ सह–प्रवक्ता एसएसपी जोशीले भने ।
नेपाल प्रहरीले आवासीय तालिमहरू पनि केही समयका लागि पोष्टपण्ड गरेको छ । हात नमिलाउने, दूरी कायम गर्ने साथै अनिवार्य बस्नुपर्ने मिटिङहरू पनि खुला ठाउँमा आवश्यक दूरी कायम गरी बस्न थालिएको एसएसपी जोशीले बताए ।
जोशीले भने– ‘हामीले अफिसमा बस्ने मिटिङहरू पनि खुला ठाउँमा आवश्यक पर्ने दूरी कायम गरेर बस्ने गरेका छौं ।’ नेपाल प्रहरीलाई लकडाउन पहिलो अनुभव भएकाले यसलाई कसरी सुरक्षात्मक तरिकाले ड्यूटी गर्ने भन्ने बारेमा अनुभव नभएको प्रवक्ता जोशीले बताए ।
हामीले मास्क र स्यानिटाइजर कहाँबाट ल्याउने ?
ड्यूटीमा खटिएका प्रहरीलाई अहिले मास्क र स्यानिटाइजरको व्यवस्था कहाँबाट गर्ने भन्ने चिन्ता छ । दिनमा १४/१५ घण्टा ड्यूटीमा खटिनुपर्ने भएकाले मास्क र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्न समस्या भएको बताउँछन् ।
‘दिनभर ड्यूटीमा खटिनुपर्छ । हामीले कहाँबाट मास्क र स्यानिटाइजरको जोहो गर्ने ? प्रहरीलाई मास्क र स्यानिटाइजर अनिवार्य बनाइएको छ । बजारमा मास्क अभाव छ, प्रहरीका सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराएको छैन,’ कोटेश्वरमा ड्यूटी गरिरहेका एक ट्राफिक प्रहरीले भने ।
यस्तै प्रहरीले दिनभर घाममा कपडाको मास्क प्रयोग गरेको देखेर केही मनकारी व्यापारी तथा स्थानियहरूले उपलब्ध गराएको मास्क प्रयोग गरिहरको बानेश्वरमा कार्यरत एक प्रहरी जवानले बताए ।
उनले भने, ‘हामी मास्क र स्यानिटाइजर खोज्न कहाँ जानु, बाटोमा देख्ने स्थानीय व्यापारीहरूले दिएको मास्कले काम चलाएको छु ।’ जोखिम मोलेर फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई राज्यले यस्तो संक्रमणको समयमा सुरक्षाका सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको बुझाई ।
'हामीले सीमित स्रोत र साधनमा जोखिम मोलेर नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिइरहेका छौं । यो बन्द हड्ताल जस्तो होइन बिल्कुलै नयाँ र प्राकृतिक महामारी भएकाले प्रहरीले जोखिममै मोलेर काम गरिरहेका हौं,' प्रहरी प्रवक्ता जोशीले भने ।
केही समयअगाडि संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका एयरपोर्टमा कार्यरत लगभग ३ सय ५० प्रहरी कर्मचारीलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयले एन ९५ मास्क वितरण गरेको थियो ।
यदि कोही प्रहरी कर्मचारीलाई कोरोनाको संक्रमण भइहालेको खण्डमा उनीहरूलाई कहाँ आइसोलेसनमा राख्ने भन्ने पनि राम्रो व्यवस्था छैन । नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १० वटा आइसोलेसन बेड भएतापनि यो पर्याप्त होइन ।
कोरोना भाइरसको माहामरी फैलिरहेको अवस्थामा आमनागरिकलाई सुरक्षा दिने प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध गराउनु सरकारको पनि दायित्व हो ।
यो सामाग्रि लोकान्तर अनलाइनमा कार्यरत गगन अर्याललको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।